Afar Arimood oo La Ogaaday Garoobada in ay Kaga Fiican Yihiin Gabadhaha aan La Guursan ( Aqri Afrta Qodob). - iftineducation.com
iftineducation.com – Baarintaano la soo waday in badan ayaa waxaa lagu guuleystay arimo badan kuwaas markii hore lagu baxshay dadaalo dheeri ah si loo helo baritaankas lagu baarayay kuwa fiican dumarka aan la guursan iyo kuwa guurka soo maray.
Waxaa la soo ogaaday in ilaa afar waxyalood ay dumar garoobada ay kaga fiican yihiin dumar kale aan waligood soo marin guur waa arin markii la soo bandhigay fajac ku noqotay dumar badn kuwaas oo aan guur soo marin.
Hadii aad kamid tahay dadka mar walba la socda wabka xogcusub waxaa laga doonayaa in aad qodobada hoose ku xusan aad si feejigan u aqriso waayo waxaa ku jira cilmi badan waxaana dhici karta fikiro kala duwan oo aad ka qabtay dumarka guurka soo maray in ay kaa baxdo kuwa kalana ay ku soo saaidan.
1: Dumarka garoobada waxaa y ku fiican yihin marka hore waa ay ka waayo aragsanyhin waayo waxaa ay horay u soo mareen guur hore.
2: Hadii ay nin labaad guursato waxaa ay taqaan xaqa uu ku leeyahay ninka qabo waxaana ay mar walba ka fakareysa in uusan mar labaad reerka ka dumin.
3: Xiliga Sariirta gabadha guurka soo martay waxaa ay ogtahay sida ugu haboon ee loo qanicn karo ninkeeda halka gabadha cusub aysan arintaas ku baraarugsaneyn.
4: Gabadha Soo martay guurska waa ay ka fiicantahay dhan kasta marka laga reebo in ay tahay qof aan bikaaro aheyn oo horay loo soo guursaday.